Gaadiid ay Al-Shabaab qaraxyo ka soo buuxiyeen oo la bur-buriyey | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Gaadiid ay Al-Shabaab qaraxyo ka soo buuxiyeen oo la bur-buriyey
Gaadiid ay Al-Shabaab qaraxyo ka soo buuxiyeen oo la bur-buriyey
Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Danab oo kooxda Al-Shabaab kala wareegay deegaanka Janaay-Cabdale oo qiyaastii magaalada kismaayo 60 km u jirta ayaa waxay wadaan howlgalo ay kubaacsanayaan maleeshiyaadka firxadka argagixisada Al-shabaab, islamarkaasna ay ku xaqiijinyaan ammaanka deegaankaasi.
Ciidamada ayaa ka war helay gaari susuuki ah midabkiisuna yahay Madoow oo Al-shabaab kasoo buuxiyeen Walxaha qarxa, islamarkaasna doonayeen ineey ku waxyeeleeyaan shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo ciidanka ayaa halkii uun yaalay oo ay deegaanka janaay cabdale kubur-buriyey.
SGaari Hoomeey oo isna qaraxyo lagu soo raray ayay sidoo kale ku qabteen duleedka deegaanka Janaay-cabdale islabartiisa ayay ku bur-buriyeen.
Bur-burinta gaadiidkan ayaa waxaa sahashay wada shaqeynta ciidanka Xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo laga dul qaaday culeyskii kooxda argagixisada Al-shabaab.
Ciidanka ayaa shalay ilaa maanta deegaanka janaay-cabdale kasoo saaray 18 miino oo Al-shabaab ay kusoo aaseen wadooyinka, wuxuuna intaasi ku daray in argagixisada markii ay deegaanka ka cararayeen ay qarxiyeen ceelbiyoodkii dadka deegaanka ay isticmaalayeen.
Maqaal horeC/Kariin Guuleed oo walaac ka muujiyey natiijada imtixaanka dugsiyada sare
Maqaal XigaMadaxweyne Deni oo weli kulamo ka wada magaalada Muqdisho
Sawirro: Kulan Wadatashi ah oo Beydhabo lagu soo Gabagabeeyay.
Wasiirka Owqaafta iyo Arrimaha Diinta KGS oo ka Hadlay Bisha Mowliid